Akwụkwọ akụkọ kacha mma
Akwụkwọ kachasị elu nke Paul Preston
Dị ka a na -ekwukarị n'etiti okwu mkparị na eziokwu, n'akụkụ akwụkwọ ọkọwa okwu nke pụtara Hispanism kwesịrị ịpụta ihu nke Paul Preston. N'ihi na, dịka onye ọkọ akụkọ ihe mere eme (yana nke nwere oke ịnụ ọkụ n'obi na akụkụ a na -adịghị ala ala nke Hispanic), onye edemede Bekee a nyochara ma mechaa chịkọta ma kesaa ...
Ndepụta nke ụfọdụ ihe furu efu, Judith Schalansky
Enweghị paradaịs ọzọ karịa ndị furu efu, dị ka John Milton ga-ekwu. Ma ọ bụ ihe ndị dị oké ọnụ ahịa karịa ndị ị na-enwekwaghị, ma ọ bụ ị pụrụ ịhụ. Ezi ihe ebube dị n'ụwa mgbe ahụ ka ndị anyị na-ejedebe na-efunahụ ma ọ bụ ibibi karịa nke taa a ga-echepụta dị ka ndị dị otú ahụ, na-agbakwụnye ...
Nkà nke agha n'etiti ụlọ ọrụ, nke David Brown dere
Sun Tzu dere akwụkwọ ya "The Art of War" laa azụ na XNUMXth narị afọ BC. Ọtụtụ agha mgbe e mesịrị, na site na narị afọ nke XNUMX ruo taa, a na-arụrịta ụka n'etiti ọtụtụ mba ma ọ bụ ụlọ ọrụ obodo. Anyị na-aga n'ihu na nka nke ...
Ụlọ ebighi ebi, nke Yuri Slezkine dere
Abụ nke Def with Dos na -eche na -atụgharịrị onye tụgharịrị okwu Lenin. Ọ ga -abụrịrị na ọ kpatara ụfọdụ ọdachi ahụ bụ nbanye nke ọchịchị Kọmunist. Ma ọ bụ na ee, karịa egwu egwu egwu, ihe mebiri, kpam kpam. Na mbụ n'ihi na amaara m ...
M. Nwoke nke inye ihe, nke Antonio Scurati dere
Ahụmịhe na -egosi na a na -atụ anya inye aka n'oge kacha agba ọchịchịrị n'ụwa. Dị ka mmiri ozuzo nke oké ifufe, obere oge tupu àmụ̀mà adaa. Ọ dịghị ihe dị mma karịa ezigbo populism nke nwere ike igosipụta onwe ya dị ka onye mmeri nke ọdịnihu kacha mma ka okwukwe a dị ịtụnanya kwụsị ...
Ladies na -egbu egbu: ụmụ nwanyị na -egbu egbu na akụkọ ihe mere eme, nke Tori Telfer dere
Enweghị mgbagha na igbu ọchụ enweghị okike. Oswald, onye ogbu mmadụ ahụ nwere akwụkwọ ya The Catcher in Rye n'okpuru ogwe aka ya, ma ọ bụ York Ripper ma ọ bụ ọbụna "Wolf nke Moscow" gaara erute ụbọchị anyị. Mana ee, enwerekwa ụmụ nwanyị ndị hụrụ mpụ kacha aghụghọ n'anya ...
3 akwụkwọ Henry Kamen kacha mma
Enwere ụbọchị dị iche iche iji rụọ ọrụ dị ka onye Hispanicist a ma ama. Na agbanyeghị nke a, ụmụ nwoke dịka Paul Preston, Ian Gibson ma ọ bụ Henry Kamen na -ekwusi ike na ha ga -aga n'ihu na -elekwasị anya na akụkọ na, ọ bụrụ na ọ bụ maka uche ndị ọzọ dabere na ụgha, akụkọ ojii ma ọ bụ mmasị agbụrụ, ga -emecha bụrụ nke akpaghasị. ...
Ọnwụnwa nke Caudillo, nke Juan Eslava Galán dere
N'ịgbagharị n'etiti nnukwu akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na ọrụ na -enye nkọwa, Juan Eslava Galán na -akpalite nnukwu mmasị n'etiti ndị na -agụ akwụkwọ, mmasị onye ode akwụkwọ nke edepụtara na akwụkwọ ọgụgụ dị ka o siri dị. N'oge a, Eslava Galán na-akpọbata anyị nso na foto ama ama. Onye ya na ndị ọchịchị aka ike abụọ na -eje ije ...
Notre Dame, nke Ken Follett dere
Ikekwe akwụkwọ a bụ otu n'ime ntakịrị ihe dị mma ịhọrọ site na otu n'ime nnukwu ihe ọghọm nke ihe anyị nọ na narị afọ nke XNUMX. Ken Follett ga -akwụsị ihe ọ bụla ọ na -eme iji nye anyị akwụkwọ edepụtara site na oke mmetụta nke mfu. N'ihi na gafere ...
Olu nke Chernobyl, nke Svetlana Aleksievich dere
Onye e debanyere aha n'okpuru bụ afọ 10 n'April 26, 1986. Ụbọchị ọjọọ nke ụwa na -abịaru nso na oke ọdachi nuklia. Na ihe na -atọ ọchị bụ na ọ bụghị bọmbụ nke yiri egwu iri ụwa n'oge Agha Nzuzo nke gara n'ihu ...
Oge Ọchịchịrị, nke Catherine Nixey dere
Na mgbe Jizọs nwụrụ n'obe ya, ụbọchị tụgharịrị n'abalị. Akụkọ ifo ka ọ bụ chi jiri n'ehihie? maka ịbelata okwu ka ọ bụrụ ihe ọchị. Isi okwu a bụ na ọ nweghị ihe atụ ga -adị mma ịtụle na ọmụmụ nke Iso Ụzọ Kraịst, n'okpuru ụkwụ, nwetara otu ụda ọchịchịrị ahụ ...
Peeji1 Peeji2 Peeji3 Ọzọ →